ओलीको विकल्पमा बामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन यस्तो सहमति भयो भन्दै खनालले गरे खुलासा::नेपाली मनको डिजिटल पत्रिका
ओलीको विकल्पमा बामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन यस्तो सहमति भयो भन्दै खनालले गरे खुलासा
सत्तारूढ नेकपाभित्रको आन्तरिक खिचातानीले प्रतिनिधिसभा ‘बन्धक’ जस्तै बनेको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नयाँ सभामुखका लागि उम्मेदवार चयन गर्न नसकेकै कारण संसद बैठक पटक पटक सरिरहेको छ । अर्कोतिर उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेले राजिनामा नदिएका कारण पनि थप समस्या देखिएको छ ।
नेकपा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच पहिला उपसभामुखको राजीनामा वा नयाँ सभामुखको खोजी भन्नेमा विवाद चुलिदै गएको छ ।
सचिवालय बैठकले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा दिन आग्रह गरे पनि नमानेपछि समस्या थपिएको हो । पुस ४ गते संसदको हिंउदे अबिधेशन सूरु भएपछि रिक्त सभामुख चयनको प्रक्रिया ११ गतेलाई तोकियो । सोही अवधीसम्म सत्तारुढ नेकपामा सभामुख कस्लाई बनाउने भन्ने विषयमा सहमति नहुंदा १६ गतेलाई अर्काे बैठक बोलाइयो । ओलीले ससदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र प्रचण्डले नेता अग्नि सापकोटाको नाम सभामुखमा अघि सारेपछि दुवैपक्षविच सहमति हुन नसक्दा संसद बैठक पुन २७ गतेलाई स¥यो ।
उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले नेकपा सचिवालय बैठकले राजिनामा दिन आग्रह गरेको निर्णय नमान्दा संसद बैठक पुन ८ दिन पछि धकेलिएको छ । पूर्वसहमतिअनुसार सभामुख पूर्वमाओवादी समूहले पाउनुपर्ने प्रचण्डको तर्क छ भने पार्टी एकता भइसककाले अनुभवी र कानूनका जानकार नेम्वाङलाई सभामुख बनाउनुपर्ने ओलीको अडान छ । उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले आफै पनि सभामुखमा आंकाक्षा राखेकी छन् ।
यसै बीच सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई आफ्नो हठ त्याग्न आग्रह गरेका छन् । सोमबार राति प्राईम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको कार्यक्रम “जनता जान्न चाहन्छन् “ मा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता खनालले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
उनले भनेका छन्,”कोही पनि मान्छेले मलाई यो पद देउ, मलाई यो पदमा राख, यो बनाउ, यो बनाएनौ भने म केही पनि गर्दिन् । म पार्टीले भनेको मान्दिन् । पार्टीले गरेका निर्णयहरु मान्दिन भन्ने हक कसैलाई पनि हुँदैन् । यो डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई पनि छैन् ।”
उनले शिवमायाले त्यस्तो हठ लिएर बस्ने भन्नेमा आफूलाई विश्वास नभएको पनि दाबी गरे । उनले थपे,”मलाई लाग्छ उहाँ त्यस्तो हठ लिएर बस्नुहुन्न । र, बस्नुहुँदैन पनि । उहाँ मेरो बहिनीजस्तो मान्छे पनि हो ।
“उपसभामुख शिवमायालाई हठ त्याग्न झलनाथको आग्रह, नत्यागे कार्वाही गर्ने चेतावनी”
म तपाईको यो लोकप्रिय माध्यममार्फत उहाँलाई सुझाव पनि दिन चाहन्छु कि त्यस्तो हठ नलिनुहोस् । यो हठले तपाईलाई नै नोक्शान पुर्याउँछ । त्यसो हुनाले पार्टीले जे निर्णय गर्छ, पार्टीले सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्छ । आग्रह र पूर्वाग्रहका साथमा निर्णय गर्दैन् । त्यो निर्णयलाई सर्वोपरि मान्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन् ।”
राष्ट्रिय सभाको सांसद पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरेर संबिधान संसोधन गर्न नेकपा भित्र छलफल चलेको र योबारे नेकपामा सबै जना एक मत रहेको खानाले बताएका छन् । साथै उक्त अन्तर्वार्ताको ४१ औ मिनेटपछि बामदेब गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने धारणा राख्दै ओलीको विकल्प पनि खुला रहेको विचार व्यक्त गरेका छन्।
राष्ट्रघातीअपराधीहरुलाई सत्तामा पुर्‍याउने नेपालीलाई देश बिग्रियो भनेर बोल्ने अधिकार छैन
ओली र प्रचण्डको नातेदार नहुदा ‘म ‘सभामुख हुन सकिन – डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे (भिडियो)
श्रीमान श्रीमतिको भेट नहुँदा परपुरुष वा परस्त्रीसंग सम्बन्ध जोडिनेक्रम सामान्य भैसक्यो (भिडियो)